Date My Pet » 5 Zvinhu Celebrities Anogona Zvinotidzidzisa nezvekudanana
5 Zvinhu Celebrities Anogona Zvinotidzidzisa nezvekudanana
Last updated: Oct. 20 2020 | 2 Maminitsi verenga
mashoko pamusoro "akasimbisa tsvimborume" George Clooney kupararira nokukurumidza sechinhu girisi moto ari kicheni; zvinotyisa rudzi, uye kupa vakadzi pasi pose kachiedza ketariro.
Chiri "yasimbiswa": Gorgeous George ari kuroorwa!
Ndezvipi anoenda kuratidza kuti kuzvipira phobia anogona zvechokwadi kurapwa.
Zvinoitawo anovamba zvimwe zvinhu zvishomanana isu dzauchatsvakurudza pano nhasi ...
Nokuti zvose zvavo glitz, kufadza, mari, uye kubwinya, kana totaura nezvokudanana uye kuberekesana, pane chimwe chinhu chinogona kurambwa: nyeredzi ndiwo sezvakangoita vamwe vedu.
Ndizvozvo. vabereki ava kuti isu kazhinji disisa uye kuvimbisa kufanana, kurwisana nevamwe chete nyaya uye nematambudziko sezvo isu "zvawo venyama."
Zvinhu zvakafanana kunetseka, mwana amai Mutambo, kutya, kukangaidzika, uye kusavimbika– kungodudza zvishomanana. Kuratidza kuti rudo ndiye equalizer.
Mukuru musiyano pano?
Pachavo nyaya vakakurumbira vari ukaongorora, vakatsoropodza uye taitamba panze pamusoro National padariro, nokuti paruzhinji kuona.
Zvazvakadaro, pano pane zvidzidzo zvishomanana zvatingadzidza "mabasa" yavo kwazvo kuonekwa uye kumabasa.
Get pencil enyu wakagadzirira.
1. Kusavimbika haisi nguva dzose pamusoro "mumwe mukadzi" ari kuwedzera kutarisika kana vachiuya zvakawanda kuti tafura. Zvinosuruvarisa, vakomana regai nguva dzose "kuchinjanisa kumusoro."
Funga yakanaka, unyanzvi, kunoitwa vaitungamirira vakadzi kuHollywood uye voruzhinji vave anonzi vanonyengera pamusoro: Halle Berry, Sandra Bullock, Jennifer Anniston, Maria Shriver. Tingadzidzei pano? Kusavimbika zvakawanda panyaya imwe munhu kupfuura munhu ari vanyengedzwa pamusoro. Regai kuvavavira, zviri nani.
2. Mari haigoni nguva dzose kutenga mufaro. Nhamba dzinoratidza kuti mumwe vaitungamirira zvinokonzera kurambana mu America imari. asi, muna Hollywood, apo nomukurumbira vabereki vane zvakawanda mari pane vakawanda vedu pachazombova mune hwose, kuchine "dambudziko muparadhiso." Tinoverenga pavhiki musoro wenhau nezvekushungurudzwa, simba zvinotitambudza, muropa maitiro, hasha utariri, uye kusavimbika. It chete anoenda kuratidza kuti anyatsofara hapasi kufurira mufaro.
3. Age musiyano hazvirevi kuva "ngaakuitirei mudariki."Tarisa Jennifer Lopez wake choreographer söpöläinen, Casper. Pane rinenge-gore 20 zera kupararira ichi vaviri, asi ivo sokuti kuwirirana fabulously. Saizvozvo, zviri kashoma kuona JLO pasina kunyemwerera nechiso chake mazuva ano. Iwe enda musikana!
4. Yakasimbiswa bachelors vanogona kuchinja mwoyo.
Dzimwe nguva anotora mukadzi zvakanaka. Other nguva, nguva kunogona kuva chikonzero chikuru. Usati hazviitike.
5. "Kana pakutanga musingadi kubudirira, edza zvakare." kunyange vashoma vedu angada nekusangana vachishandisa kutenderera vamwe uye pfupi womene ratiri vakapupurira nevamwe nyeredzi, pane chinhu chinofanira akati kwavo kushinga mupfungwa uye avo kudavira kuti vanogona kunyora "nekuguma anofara" avo pachavo rudo nyaya, nokuramba yakazaruka kuda. Semuyenzaniso, mukurumbira vakaita Steve Harvey, Jennifer Lopez, Elizabeth Burton, uye Demi Moore vakafamba pasi mukana kupfuura nguva kana mbiri. Avo vaifungidzira uzivi? pakupedzisira, zviri akasungwa kuramba.
Ikoko une naro.
Stars kuvaraidza isu. Dzimwe nguva vanogona isu dzidzisa. Zvidzidzo izvi shanu kushumira zvakananga nokuda chinangwa ichi. Tose tinofanira kuteerera navo.